Impumelelo yeNtengiso ye-B2B ixhomekeke kuMbutho uphela | Martech Zone
Impumelelo yeNtengiso ye-B2B ixhomekeke kuMbutho uphela
NgoMvulo, Juni 15, 2015 NgeCawa, uJuni 14, 2015 Douglas Karr
Yintoni Indlela yokupheka impumelelo yeNtengiso yeDijithali ye-B2B?
2015 Yintoni esebenzayo phi Ingxelo iyavakala kule mihla yedijithali yemigangatho yedijithali. Ukusebenza ngokubambisana ne Umbutho weNtengiso kwaye Isangqa noPhando, Omobono kuvavanywe abaphathi abaphezulu abangama-331, e-USA nase-UK, kuThengiso, ukuThengisa, iiNkonzo zaBaxumi, i-HR kunye noNxibelelwano lwangaphakathi ukuze baziqonde ngcono iinjongo zabo, uhlahlo-lwabiwo mali, imisebenzi kunye nezicwangciso / nemingeni.
Nantsi i izithako u-Onobono ubonelela ngale mpumelelo:
Ukwakha ukhetho lwebrand ngoku uxanduva lomntu wonke.
Onke amasebe usebenzisa amajelo edigital digital.
Ukuthengisa kukhokelela kwindlela amajelo amatsha njengentlalontle, ividiyo, kunye neebhloko (kodwa ungaqinisekanga ngokusebenza).
A isicwangciso esisesikweni sedijithali inefuthe elikhulu.
An indlela edibeneyo yenziwe ngokukhokelwa kwindawo esembindini, wonke umntu okuqonda ukubaluleka, inkxaso yombutho, ukulungela ukusebenzisana nokulungelelanisa iinjongo nezinto eziphambili.
Ukuqukunjelwa kwengxelo kunokuba yinto enempikiswano… ukubeka intengiso kulawulo lwayo yonke Isicwangciso seDijithali ye-B2B. Ngokwam, ndicinga ukuba kunokuba yinto enomdla kakhulu. Abathengisi bahlala bengakholeleki ekuphuhliseni umbono, kodwa kufuna intengiso kunye nenkonzo yokuqhubela ekhaya ukuphunyezwa kwesi sicwangciso.
Ezinye iinkampani zilungelelanisa kumbindi IGosa leNgeniso eliyiNtloko (CRO) ukuba noxanduva oluphambili lokugcina, ukufumana kunye nokwandisa ixabiso lilonke kubudlelwane babathengi. Ndicinga ukuba ndiza kusityhala esi sicwangciso ngaphambi kokuphosa konke kwintengiso.
tags: Ukuthengisa kwe-b2bb2b impumelelo kwintengisoyenza isangqa kuphandoInkonzo eyenzelweimpumelelo yentengiso yedijithaliezengqeshounxibelelwano lwangaphakathiumonaintengiso yoluntu